Balekela eNyakatho uye e-Muskoka A-Frame | 4-Isizini Chalet - I-Airbnb
Balekela eNyakatho uye e-Muskoka A-Frame | 4-Isizini Chalet
Ukuvakasha okumnandi kwabathandanayo, abahlala eSigodini esihle Esifihliwe.
Lesi sakhiwo esine-A-frame engu-70 sesicatshangelwe kabusha emhlabeni wesimanje. Vuka uye kuma-treetops acwebezelayo, wenze ukudla okumnandi futhi uphumule ngomlilo, ekamelweni elibukeke kahle ehlathini.
Fihla away at the Cottage noma wenze kube base yakho for uhambo olungapheli: 3 imiz kuya yangasese ukufinyelela ebhishi, ukushushuluza eqhweni & eqhweni. Igalofu esezingeni lomhlaba. Ukunyuka, umkhumbi noma isikeyiti seqhwa e-Arrowhead noma e-Algonquin Parks & vakashela i-Huntsville ukuze uthole ubuhle bendawo, yonke imizuzu nje kude.
Ukuze uthole izithombe ezengeziwe, amathiphu ethu okuvakasha we-Pro kanye nemininingwane yokuvakasha/yezokuvakasha eyintandokazi yendawo, silandele ku-IG @ muskokaaframe. Noma bona okwengeziwe ngezinye izindlwana zethu ze-boutique @
escape.north Efihliwe Valley kuyinto umakhelwane ehlathini ukuthi ujabulela konke Muskoka has okunikezwayo. Inhlanganisela yePeninsula Lake, i-Ski Hidden Valley, izifundo zegalofu eziningi, amasevisi amaningi edolobheni lase-Huntsville, kanye namapaki esifundazwe aseduze e-Arrowhead ne-Algonquin enza ukubukwa okumangalisayo kanye nokufinyelela emisebenzini engapheli, unyaka wonke.
Noma, uma ufuna nje ukuvakasha kwangasese, indlu yethu yeholidi eyakhiwe ngo-A-frame yenzelwe ukuthandana, ukuthokomala nokunethezeka engqondweni.
• Igumbi elihle yigumbi lokuphumula nelokudlela elivulekile. Indawo esesitezi kuya ophahleni, amafasitela esitezi esi-2, kuze kufike esiqongweni se-A-frame, ukuvumela ukubukwa okungakhiwe ehlathini.
• Indawo yomlilo kagesi •
Ikhishi lika-Cook 's incl. i-toaster, i-microwave, umshini we-esresso, umshini wekhofi we-drip kanye nemimese yompheki
• Ikamelo lokulala linophahla oluphindwe kabili kanye nokubukwa kwe-treetop, okubheke umakhelwane. Izindlu ezingu-5 kuphela kule-c cul-de-sac encane.
• Igumbi lokugezela elisha elisha elinobhavu/ishawa
• Amashidi namathawula ahlanzekile. Letha amathawula akho asebhishi.
• I-Wifi inamandla futhi iyashesha njengejubane lase-Toronto. Kuze kufinyelele ngisho esitokisini!
• I-TV ebanzi ene-youtube neziteshi ezilinganiselwe. Noma i-Chromecast kusuka kuma-akhawunti akho.
• Atari Flashback X ngoba esikoleni endala amageyimu fun. Frogger, ubani?
• An Amazon Echo (Alexa) angasebenza eziningi ushintsho, uma ufuna ukuhlala izandla-free noma cha vuka off usofa ethokomele.
• Izibani zezintambo ziyakhanyisa ihlathi ebusuku.
• Idekhi ene-bbq, izihlalo ze-muskoka (unyaka wonke) kanye netafula lokudlela (inkathi yonyaka), elibheke ehlathini.
• Ingemuva legceke elinomlilo. Izivakashi zingasebenzisa ibhulashi elivela ehlathini noma zilethe izinkuni zakho.
• Indawo yokubeka yangaphandle ye-skis/snowboards/amabhayisikili.
• Ebusika, ukuduma kweqhwa kusele ukuze izivakashi zizijabulele.
• Ihlathi ehlathini elingemuva lilungele ukuhlola kancane kodwa aligcinwe phezulu. Imingcele yendlu iphawulwe ngezigxobo zokuphepha.
• Letha skates yakho! Winter skating echibini ngoJanuwari & Februwari (isimo sezulu ukuvumela) at yethu yangasese, umakhelwane ebhishi nge beach pass yethu.
• Siyakujabulela ukwabelana ngalawa masevisi akhethekile ukuze uwathokozele futhi uwasebenzise kalula kodwa sicela uqaphele ukuthi ukusetshenziswa kusengozini yakho.
• Kunomkhawulo omkhulu, wokuhlala kwabantu abangu-2. Izivakashi kufanele zibhaliswe ku-app ye-Airbnb.
• Azikho izivakashi ezingagunyaziwe, imicimbi, amaseshini ezithombe noma izithombe ezivunyelwe ngaphandle kwemvume yangaphambilini. Sivulekile kumathuba ahlukahlukene kodwa kudingeka kuxoxwe ngawo kusenesikhathi. Ukusinda kungase kusetshenziselwe ukungavumelani.
• Sinayo inqubomgomo yezilwane ezifuywayo. Sicela, akudingekile ukuthi ubuze. Siyakwazisa ukuthi kunezilwane ezifuywayo eziningi ezinhle kodwa asenzi okuhlukile. Siyabonga ngokuqonda.
• I-2 kuya kumahora we-2.5 kusuka ku-GTA. Ukufinyelela okulula kusuka ku-400 N kuya ku-Hwy 11 kuya ku-Hwy 60 E.
Kungakapheli imizuzu engu-5 uhamba ngemoto:
• Umphakathi, ibhishi elizimele elinokudlula kwezivakashi (imizuzu engu-3 noma u-15 uhamba ngezinyawo). Ibhishi linenkundla ye-volleyball yesihlabathi kanye nensimu yotshani yemidlalo yotshani. Noma sebenzisa ngokunenzuzo i-skiating rink echibini ngo-January & February (ukuvunyelwa kwesimo sezulu).
• I-Ski Hidden Valley (imizuzu engu-2) yokutshuza eqhweni, ukushushuluza eqhweni nepaki lomhlaba. Noma imizuzu engu-10, ibanga lokuhamba ngezinyawo, kodwa libuhlungu, uma uthatha izimpahla zakho.
Phawula: Kukhona indawo engasemthethweni yokungena/yokuphuma ekugcineni noma emgwaqweni wethu, lapho i-Lazy Lady ivuliwe. Hlola iwebhusayithi yethu nsuku zonke ukuze uthole izilungiso, njengoba lokhu kungashintsha ngenxa yesimo sezulu noma imiphakathi entabeni.
• I-deerhurst Highlands Golf Course
• I-resort ye-deerhurst yamasevisi we-spa nezindawo zokudlela
• Efihliwe Valley Resort (ngaphakathi ibanga ngezinyawo) futhi Birches Restaurant. Ukuze uthole imali encane, ungangena ezindaweni zabo ezinjenge-pool, i-hot tub nenkundla yethenisi (kusalindwe ukutholakala/ubuze ku-resort)
• I-Grandview Golf Club, inkambo ye-ClubLink eyakhiwe
nguMark O'Meara •
Treetop Trekking Ngaphakathi kwemizuzu engu-10 drive :
• Idolobha lase-Huntsville kukho konke ongakudinga, kusukela ezintweni ezidingekayo kuya kuvulande ongasemanzini, izindawo zokudlela, ukuvakasha, i-Kwartha Dairy ice cream nezitolo zendawo
• I-Limberlost Forest and Wildlife Reserve, inokufinyelela kwamahhala, unyaka wonke. Ukunyuka intaba, ukuhamba ngesithuthuthu, ukushushuluza eqhweni nokushushuluza eqhweni.
yokushayela • I-Arrowhead Provincial Park, ukufinyelela unyaka wonke. Ukunyuka intaba, ukubhukuda, ukuhamba ngesikebhe, ukudoba kanye nokugibela ibhayisikili entabeni. Ebusika, zama snowshoeing, tubing, 33 km of imizila for cross izwe skiing noma 1.3 km ice skating indlela, ngokusebenzisa ehlathini.
• I-North Ridge Ranch, uma uke wafuna ukuzama i-sledding yenja.
yokushayela • Ipaki lesifundazwe elidumile,
i-Algonquin • Beyond Equine Centre for inqola noma sleigh ugibele!
4.99 · 137 okushiwo abanye
I-chalet isemgwaqweni we-de-sac wezindlu ezi-5 nje, endaweni enamahlathi e-Hidden Valley. Ekhoneni elisuka e-Ski Hidden Valley kanye nohambo olufushane oluya ogwini lomphakathi olufinyeleleka ngasese e-Peninsula Lake, lena eminye yemisebenzi engapheli etholakala unyaka wonke. Zithokozise ngezigigaba eziningi zasendaweni, izintelezi nezinto zokudla eziseduze noma imizuzu ukuqhela edolobheni lase-Huntsville, idolobha elikhulu lase-Muskoka elingasechibini.